Izinwele ze-Afro Curly: Izitayela zezinwele, Imikhiqizo emihle nemithrendi ye-2020?
Izinwele ze-Afro ezinama-curly noma ukuthi i-afro curly kubukeka kukhula kakhulu ekuthandeni! Kusukela ekuqaleni kwezinguquko zezinwele zemvelo emuva ku-2007, yonke imigomo yemvelo sista iwukuba uthole lapho izinwele zikhulu futhi zihamba kahle ngangokunokwenzeka! Ngakho-ke ukuhlanganisa i-afric curly kuyo yonke inkazimulo yayo! Izinwele ze-Afro ezinamazinyo izinwele zemvelo ezinesimo esihle se-dome noma se-sphere esakhula futhi siphume njenge-afro yendabuko, kodwa ibukeka ngendlela ebonakalayo esikhundleni sokubukeka okubukeka kahle. Abanye ama-naturals bathanda ukuma ama-afro abo enhliziyweni esikhundleni se-afro, futhi lokho kuhle kakhulu.
1 Izitayela zezinwele nezithandwayo ezidumile
1.1 INDLELA YOKUTHOLA UKUFANELEKA KWE-AFRO KUHLELELE: idwala eliqhakazile!
2 Kanjani Ukwenza Izinwele Zami Zokwemvelo?
3 UKUFAKA I-CLIP-INS
4 IZINDLELA ZABANTU BAMANZI Nama-Wigs
4.0.1 UHLELO LOMHLABA WEMPILO!
4.0.2 Ngithemba ukuthi lokhu kuyasiza. Kuze kube yisikhathi esilandelayo sis!
Izitayela zezinwele nezithandwayo ezidumile
Izinwele ze-Afro ezinama-curly zilokhu zifana nokuthatha iminyaka ukukhula nohlobo lwezinwele ze-4. Noma kunjalo, ngokuthuthukiswa kwamuva kuma-wigs, i-clip-ins kanye nezandiso zezinwele ze-kinky, lokhu kubukeka kungakaze kube ngokwemvelo ukudonsa. Akukhona nje kuphela ukuthi ungahamba kusuka emfishane ukuya ekugqibeleni ngaphansi kwemizuzu ye-10, kodwa akunandaba ukuthi ukuzalwa kobubele ozalwa nawo. Ungakwazi ukukhipha ukubukeka kwe-Afro Curly ngezandiso. Uma usuvele usungokwemvelo, ngincoma ukufaka i-ins yesiqeshana. Thola i-clip ye-ins ukuze ihlanganise kahle izinwele zakho zangempela ngoba ungakwazi ukuphatha kalula iphethini ye-curl nge-knist noma ama-Bantu ama-knots, engizokuchaza kamuva. Uma unephethini elingahle ngempela le-curl njengo-3a 3b, kuyoba nzima ukuthola i-afro ekhaleni ukubuka ngaphandle kokuba izinwele zakho zifinyelele. Kuwe divas, ngincoma ukuthunga kwendabuko ins futhi ukuvalwa. Noma umugqa wethu omfushane we-Nubian wig. Iphethini engcono kakhulu yokusebenzisa i-curl ezoyisebenzisa izoba yi-Kinky Curly, Coily noma amaqoqo ama-Afro Kinky njengoba lokhu kuzokwenza ukuthi ibukeke kahle kakhulu kwe-Afro Curly!
INDLELA YOKUTHOLA UKUFANELEKA KWE-AFRO KUHLELELE: idwala eliqhakazile!
Indlela enhle yokufeza i-Afro ehamba kahle kakhulu i-Afro ukulandela lezi zeluleko ezilula. Into ebalulekile okufanele uyicabangele lapho uhlela ukubukeka kwakho ukukhumbula ukuthi ukubekezela kuyinhle. Ukukhulisa izinwele zakho kuthatha isikhathi (isikhathi esiningi nesikhathi esiningi i-LOL) nokho ngizokuvumela emacimbini ambalwa ukuba angifake kuze kube yilapho usenza! Ake siqale
Kanjani Ukwenza Izinwele Zami Zokwemvelo?
Uma izinwele zakho zemvelo zinde futhi zinzima ngokwanele, lesi sitayela asikwazi ukukhipha. Usuvele unesakhiwo se-3c noma se-4a esingokwemvelo kunokuba ugeze futhi uhambe cishe uzokwanela ukufeza leso sitayela. Nokho, uma une-4b 4c izinwele, khona-ke kungase kube nzima kuzuzwe lokho okubukeka kahle kwe-afro curly. Esikhundleni salokho, kuzodingeka wenze noma ukuphuma noma ama-bantu ama-knots ukuze usebenzise iphethini yakho ye-curl.
Kukhona isifundo sevidiyo esibonisa ukuthi ungafaka kanjani I-afro kinky curly clip ins kuleli khasi ukudala ubude obuphakathi kwe-afro ngezansi!
Lokhu kuthungwa kwesici kuye kwafunwa ngemuva kwe-due kuya ekuthandeni kwayo kwamuva emiphakathini yase-Afrika yaseMelika.
Uma ungenayo ubukhulu noma ubude ukuze ususe i-afric curly, khona-ke ungasebenzisa njalo i-clip ye-ins. Thola izandiso zemvelo ezihlangene nakho okwangempela izinwele zokuthungwa, okubaluleke kakhulu; kungenjalo, izinwele zakho ngeke zihlanganise kahle. Ngincoma ukuthola ubude obufushane ukuze izinwele zidale umphumela we-dome. I-10 "noma i-12" isebenza kahle futhi uzodinga i-1.5-2 iqoqo levidyo. Faka isicelo se-clip esikhungweni sezinwele zakho. Manje isikhathi saso sesitayela futhi uhlele izinwele. Ukuze ubukeke ngendlela efanele uzodinga ukuguqula izinwele noma ukudala ama-Bantu amazinyo fometha ama-curl bouncy. Ukuphumula okumile ngokushesha, futhi kulula ukufaka iziqeshana ebusuku, ukuguqula izinwele nokungahambisani nalokhu ekuseni. Noma kunjalo, ama-bantu ama-knot enza i-best curly afro curly. Ukwehla ngokwenza i-Bantu knot ngaphandle ukuthi kuthatha kuze kube phakade ukuze umile ukuze kudingeke uhlale phansi kwe-hood dryer. Isici esibalulekile sokucabangela lapho uzama ukuthola i-nice look twist ukugwema ama-crams aqinile. Lokhu kuqinisekisa ukuthi unganciphisi ukuthungatha futhi uvumela izinwele zakho ze-Afro ukuba zikwazi ukulawula okuningi.
IZINDLELA ZABANTU BAMANZI Nama-Wigs
Indlela elula futhi ehamba phambili yokuthola ukubukeka kwe-afro ukusebenzisa i-wigs! Ungakwazi ukufeza noma yisiphi isitayela, umbala, ukuma, nekhalenda eliyinkinga oyifunayo ngomzamo omncane ngokumane Ukufaka i-afro kinky curly wig efana nale!
Ngincoma ukuthi nizame i-Short Nubian Coily Wig Ungakwazi ukuma nokuchaza izikhwama ngendlela efanayo ongenza ngayo izandiso ezifana nokusebenzisa izinwele ze-kinky. Ungakwazi ukugeza nokuhamba kanye nesitayela sokuhlelwa njengezinto zokuphuma kanye ne-Bantu knots outs noma ukufaka izinwele ze-afro crochet.
UHLELO LOMHLABA WEMPILO!
Kumele uqeqeshe izinwele zakho ukuze zikwazi ukuphathwa kahle phakathi nazo zonke izinkathi zomhlaba. Kodwa-ke, kuleli hlobo, kubonakala ukuthi isitayela sokuzivikela esikhululekile singase sibe yindlela engcono kakhulu. Nakuba lokhu kungase kube njalo, sonke siyakuthanda ukubonisa i-kinky curly yethu tress! Obani abafuna isitayela sokuzivikela sonke isikhathi ??? Uma uzozama ukushaya izinwele zakho ze-Afro Curly noma ugobile ngaleli hlobo, qiniseka ukuthi ugcina ukuphela kwakho kuphefumula.
Ukusebenzisa ikhi yekhwalithi kungahamba ngendlela ende. Masibhekane nakho, ukukhipha izinwele zakho kungaba ukuhudula, ikakhulukazi uma isomile noma ungasetshenzisiwe. Kodwa-ke, ngesilinganiso esifanele sokuvumelana, ngokwemvelo uqala ukusimama ngokwengeziwe ukuze ukhululeke ngokwengeziwe kwisitayela noma uyahamba. Kodwa-ke, sincoma ukusebenzisa i-conditioner ye-in-conditioner evumelana kahle nephethini yakho ye-curl futhi ukukhetha kuphela empandeni. Ngenisa ngobumnene impande bese uphakamisa. Lokhu kuzokwenza ivolumu eyengeziwe futhi usize izinwele zakho zime ukuze zenze ukubukeka kwe-afro! Uma izinwele zakho zincane, uzothola ama-afro ahamba phambili ngokukhipha izinwele zakho ngokuzithoba kusukela ezimpandeni kuze kube phakathi kwezingubo zakho zezinwele ngemva nje kokuphuma noma i-Bantu knot out!
Ngithemba ukuthi lokhu kuyasiza. Kuze kube yisikhathi esilandelayo sis!
Imikhiqizo Yokunakekelwa Kwezintshe Okuhle Kwabesilisa Abamnyama
Indlela Yokuguqula Izinwele Kinky To Hair Curly
Ucabanga ngokuhamba nge-blonde? Nazi ezinye amathiphu!